रेष्टुरेन्ट र पसल बिक्री गर्ने बढे, भेटिदैनन् किन्ने ग्राहक – Post Patrika
मुख्य पृष्ठ /News/रेष्टुरेन्ट र पसल बिक्री गर्ने बढे, भेटिदैनन् किन्ने ग्राहक
रेष्टुरेन्ट र पसल बिक्री गर्ने बढे, भेटिदैनन् किन्ने ग्राहक
सामाजिक सञ्जाल फेसबुकमा आइतबार चोभारको भ्यू प्वाइन्टमा सञ्चालित क्याफे बिक्रीमा भनेर विज्ञापन राखिएको छ । ‘पसल खरिद बिक्री’ फेसबुक पेजमा राखिएको रेष्टुरेन्टको मूल्य आपसी समझदारीमा निर्धाण गर्ने उल्लेख छ । सोही पेजमा अर्को रेष्टुरेन्ट पनि बिक्रीमा राखिएको छ । लगनखेल हनुमान मन्दिरनजिकै ६० सिट क्षमताको रेष्टुरेन्ट ३२ हजारमा बिक्री गर्न लागेको विज्ञापनमा उल्लेख छ ।
पसल खरिद बिक्री फेसबुक पेजमै कलंकी मकालु पेट्रोलपम्प नजिकै फेन्सी पसल पनि बिक्रीमा रहेको भनिएको छ । मीनभवन राधाकृष्ण मन्दिरनजिकै लेडिज फेन्सी सप पनि बिक्रीमा छ ।
अर्को फेसबुक पेज ‘पसल सटर किनबेच’ले काँडाघारी सूर्यमुखी चोकको पार्लर सुपथ मूल्यमा बिक्री गर्न लागेको भन्न्दै बिज्ञापन राखेको छ । सोही फेसबुक पेजमा शान्तिनगर ओमशान्ती चोकमा चलिरहेको होलसेल तथा खुद्रा कस्मेटिक पसल बिक्रीमा भनेर राखिएको विज्ञापन देखिन्छ ।
घरजग्गाको अनलाइन मार्केट प्लेस नेपालहोम्स डटकममा ठमेलको राम्रै होटललाई अर्जेन्ट बिक्रीमा भनेर राखिएको छ । साढे ६ आना क्षेत्रफलमा फैलिएको ६ तले होटलको मूल्य घरसहित १४ करोड तोकिएको छ ।
ललितपुरको कुपण्डोलमा लकडाउनअघि चल्तीमा रहेको बुटिक पसल २५ लाखमा बिक्री गर्न लागेको नेपालहोम्सको साइटमा देखिन्छ । यही साइटमै न्यूरोडको परफ्यूम र कुर्ता सलवारको पसल ११ लाख मूल्यमा बिक्रीका लागि राखिएको छ ।
कुमारीपाटीको पेट्रोलपम्प नजिकै रहेको ‘ओएमजी फेसन वेयर’ पसल बिक्रीमा लेखेर टाँसेको धेरै भइसक्यो, अझै किन्ने ग्राहक भेटिएका छैनन् । न्यूरोडको खिचापोखरीमा जीतनारायण डंगोलले पसल भाडामा भनेर राखेको ३ महिना पुग्नै आँट्यो । लकडाउन भएको लगत्तै खाली भएको कोठा भाडा मिलाएर दिन खोज्दा पनि कोही व्यापाररु आउन चाहिरहेका छैनन् ।
ठमेलका घरबेटी चन्दन कायस्थले घरभाडा ६० प्रतिशतसम्म छुट दिँदा पनि दुई व्यवसायी टिक्न नसक्ने ठानेर निस्किए । अरु धेरै घरबेटीले भाडा छुट दिँदा दिँदै पनि धेरै व्यवसायी पसल बन्द गरेरै भएपनि निस्किन थालेका हुन् ।
काठमाडौंका चल्तीका मलहरुमा छिर्दा धेरै पसल बिक्रीमा राखेको देखिन्छ । ७ साउनमा सरकारले लकडाउन खुला गरेपनि झम्सिखेलका धेरै रेष्टुरेन्टको गेट खुलेन । अहिले पुनः रेष्टुरेन्ट सञ्चालनमा रोक लगाइएको छ ।
यी त केही प्रतिनिधि उदाहरणमात्र हुन् ।
यतिबेला तपाईंहरु काठमाडौं उपत्यका फन्को मार्नुभयो भने जताततै ‘पसल बिक्रीमा’, ‘सटर भाडामा’, ‘घर भाडामा’ लेखिएका विज्ञापन छ्याप्छ्याप्ती देख्नुहुन्छ । व्यापारिक केन्द्रदेखि गल्लीमा सञ्चालित पसल वा रेष्टुरेन्ट सबै बिक्रिकै मुडमा छन् । कोरोना महाहारी बढ्दै जाँदा यो संख्या दिनदिनै बढिरहेको छ ।
बन्द सटरभित्र कैद भएका पसलहरुको भाडा पुरै तिर्नुपर्ने तर आम्दानी सून्य भएपछि पसल बेच्न आत्तिएका धेरै छन् । तर, यो संकटमा किन्ने ग्राहक पाउनु कहाँ सजिलो छ र ? नेपाल भूमि रियलस्टेट एजेन्सीका सञ्चालक बिक्रम लामा भन्छन– ‘अहिले रेष्टुरेन्ट र पसल बिक्रीका लागि चाप छ, खरिद गर्ने ग्राहक शुन्य ।’
चलनचल्तीको भन्दा निकै सस्तो मूल्यमा पसल तथा रेष्टुरेन्ट बिक्री गर्न खोज्दा पनि ग्राहक भेट्याउन कठिन छ । अहिले पसल किन्ने ग्राहक भेट्याउनु भनेको साक्षत भगवान फेला पार्नु सरह हो ।
३५ प्रतिशत पसल बिक्रिमा !
नेपाल राष्ट्रिय व्यवसायी महासंघका अध्यक्ष नरेश कटुवाल भन्छन्, ‘अहिले देशभर ३५ प्रतिशतभन्दा बढी व्यवसायीले पसल बिक्री गर्न खोजिरहेका छन्, महामारी लम्बिदै गएमा यो आँकाडा अझै बढ्दै जानेछ ।’ उनी थप्छन्, ‘अहिले पसल बिक्रीमा राखेर बिक्री हुनेवाला छैन्, उनीहरु चर्को घरभाडा तिर्नुभन्दा बरु पसल बन्द गर्न चाहिरहेका छन् ।’
पसल अगाडि मात्र होइन, चोक, गल्ली, सार्वजनिक स्थल, पार्क, सडकका खम्बामा पनि पसल तथा रेष्टुरेन्ट बिक्रीमा राखेको विज्ञापन देखिन्छ ।
सानो पसलको दैनिक ब्यापारले घरभाडा, बालबच्चाको शिक्षा र हातमुख जोड्न मुस्किलले खर्च जुटाइरहेका काठमाण्डौका हजारौं उद्यमीहरुले यतिबेला आफ्ना पसल र साना रेष्टुरेण्टहरु ‘बिक्रिमा’ राखेका छन, तर, बन्द सटरभित्र कैद यी पसलहरु किन्ने ग्राहकको भने नामनिसाना छैन् ।
राष्ट्रिय व्यवसायी महासंघका अध्यक्ष कटुवाल भन्छन्, ‘काठमाडौं उपत्यकाका प्रमुख व्यापारिक केन्द्रहरु न्यूरोड, बानेश्वर, सुन्धारा, असन, इन्द्रचोक, पुतलिसडक, कुमारीपाटी, लगनखेल, ठमेल, झम्सिखेल, सानेपा, चाबाहिल, नयाँ बसपार्कमा पनि धेरै पसल तथा रेष्टुरेन्ट बिक्रीमा राखिएको छ, अर्थात् पसल बन्द गर्ने क्रम जारी छ ।’
४ महिनादेखि बन्द सटरको घरभाडा तिरितिरी व्यापार नै नहुने पसल खोल्नुभन्दा उनीहरु घरतिरै बस्न चाहिरहेका छन् । कतिपयले पछि काठमाडौं आएर नयाँ व्यवसाय गर्ने सोँच बनाइरहेको कटुवाल बताउँछन् । व्यवसायी सम्पर्कमा नआएका धेरै घरधनीले आफै सटर भाडामा लगाउन पनि सुरु गरिसकेका छन् ।
ललितपुरको लबिम मल, बानेश्वरको आइप्लेक्स मल, न्यूरोडको रञ्जना मल, थापाथलीको ब्लुबर्ड मलले लकडाउन अवधिको घरभाडा छुट गरेपनि साउनदेखि पुरै भाडा लिन थालेका छन् । रञ्जना मलका पनि धेरै होलसेल पसल बिक्रीमा रहेको व्यवसायी बताउँछन् । त्रिपुरेश्वरको वल्र्ड ट्रेड सेन्टरमा ‘स्पेश खाली’ भन्दै बिज्ञापन आउन थालिसकेको छ ।
नेपालमा रेष्टुरेन्ट कल्चर विकास गर्ने नाङ्लो चर्को घरभाडा र कर्मचारीको खर्च धान्न नसक्ने भएपछि भाटभटेनी र महाराजगञ्जमा रहेका ‘द बेकरी क्याफे’का दुईवटा आउटलेट बन्द गर्नुप¥यो ।
सरकारले तीन महिना लामो लकडाउन ७ साउनदेखि खुला गरेर व्यापार व्यवसाय निर्वाध रुपमा सञ्चालन गर्न दिने भनेपछि व्यवसायी उत्साहित भएका थिए । व्यवसायीले ढुसी पलाएका होटल र रेष्टुरेन्ट सफा गरेर सञ्चालनमा ल्याए । तर, संक्रमित र मृतकको संख्या अत्यासलाग्दो ढंगले बढ्न थालेपछि सरकारले अत्यावश्यक बाहेकका सबै व्यापार, व्यवसाय बन्द गर्न निर्देशन दियो ।
अहिले रेष्टुरेन्टले होम डेलिभरीको सेवामात्र दिन पाउँछन् । ग्राहकले रेष्टुरेन्टमा बसेर खान पाउँदैनन् । दोस्रो पटकको कडाईले रेष्टुरेन्ट व्यवसायीहरु झन समस्यामा परेको बताउँछन् त्रिशाराका सञ्चालक सोभनबीर मालाकार ।
पसलदेखि पार्लरसम्म, सडकदेखि मलसम्म सबै बिक्रिमा
रियलस्टेट एजेन्सी नेपाल भूमिका सञ्चालक लामाका अनुसार अहिले होटल, रेष्टुरेन्ट, फेन्सी पसल, कस्मेटिक पसल, एजुकेसन कन्सलटेन्सी, ट्राभल, ब्युटिपार्लर, महाबौद्धका इलेक्ट्रोनिक्स पसल, न्यूरोडका फेन्सी पसल, स्पा, क्लब बिक्रीमा आइरहेका छन् ।
उनका अनुसार ठमेल, झम्सिखेल, बालुवाटार, महाराजगञ्ज, लाजिम्पाट, गैरीधारा, सानेपा, बानेश्वर, जावलाखेल लगायत क्षेत्रका रेष्टुरेन्ट बिक्रीका लागि चाप छ । विभिन्न ब्रान्डका शो–रुम पनि बिक्रीका लागि प्रस्ताव आइरहेका छन् ।
‘लकडाउन अघि महिनामा २÷४ वटा पसल तथा रेष्टुरेन्ट बिक्री गर्न प्रस्ताव आउँथ्यो’ लामा भन्छन्, ‘अहिले महिनाको २०÷२५ वटा आउन थालेका छन् ।’ अफिसका लागि ठूलो घर वा फ्ल्याट भाडमा लिएका व्यवसायीले स्पेश सेयरिङ गर्न थालेका छन् ।
प्रोपर्टी २४७ का सञ्चालक विनोद सुवेदीका अनुसार अहिले धेरैले स्पेश सेयरिङका लागि पार्टनर खोजिरहेका छन् । ठूलो ठाउँबाट सानो ठाउँमा सर्ने क्रम सुरु भइसकेको उनी बताउँछन् ।
अहिले काठमाडौं उपत्यकाका धेरै मल खाली भइसकेका छन् । भर्खर भर्खर भरिन थालेको पुतलीसडकस्थित स्टार मल खाली हुँदैछ । कम्प्युटर पसल, कन्सलटेन्सीले भरिएको मलका धेरै सटर बन्द भइसकेका छन् कतिपय बिक्रीमा छन् ।
ठमेलको छायाँ सेन्टर भर्खर सञ्चालनमा आउँदै थियो, पूर्ण रुपमा सञ्चालनमा नआउँदै व्यवसायीले धमाधम सटर बन्द गर्न थालेका छन् । बैशाख १ गते उद्घाटन गर्ने भनिएको कलंकीको खसी बजारमा निर्माण भएको होलसेल मार्केट नेशनल बिजनेश ट्रेड सेन्टर (एनबीटीसी) पनि कोभीडको मारमा परेको छ । एनबीटीसीको उद्घाटन कार्यक्रम असोज १ गतेलाई सारिएको छ । आर्मीले बनाएको न्यूरोडको व्यापारिक मल पनि कोरोना कहरमा फसेको छ ।
५० प्रतिशतसम्म सस्तोमा भेटिन्छन् पसल !
कोरोना कहरबाट आत्तिएका उद्यमीहरुले घरभाडाको बोझले थिचिनुभन्दा सस्तो मूल्यमा पसल बेच्ने जुक्ति लगाएका छन् । बिक्रिमा रहेका पसलको अफर मूल्य हेर्दा अचम्म मान्नुपर्ने अबस्था छ ।
‘धेरैले बरु ५० प्रतिशत सस्तोमा बिक्री गर्छु, किस्तामा पैसा बुझ्छु तर साथीभाई स्टमित्रले बिक्री गरेर निस्केको थाहा पाउनु हुँदैन भन्छन्’ लामा सुनाउँछन्, ‘त्यस्ता प्रोपर्टी वेबसाइट वा सामाजिक सञ्जालमा विज्ञापन नगरी भित्रभित्रै ग्राहक खोजेर बिक्री गरिन्छ ।’
उनका अनुसार अहिले प्राइम लोकेसनमा भव्य डेकोरेसनसहितका रेष्टुरेन्ट पनि निकै सस्तो मूल्यमा बिक्रीमा आइरहेका छन् । कोभीड अगाडि प्राईम लोकेसनमा पसल, व्यवसाय किन्दा वा सुरु गर्दा खाली ठाउँकै चर्को मूल्य तिर्नुपथ्र्यो । अनिमात्र पसलका सामानको मुल्यांकन गरिन्थ्यो । अहिले ठाउँको मूल्य तिर्नुपर्दैन, समान पनि मिलाएर दिन्छन् । घरधनीलाई अग्रीम भाडा बुझाउन पनि पर्दैन । सामान्य अवस्थामा घरबेटीले ६ महिनासम्मको घरभाडा नबुझाई सुखै थिएन ।
व्यवसायी यत्तिकै पसल वा रेष्टुरेन्ट बन्द गर्नुभन्दा बरु ५० प्रतिशत छुटमा दिएरै भएपनि बिक्री गर्न पाए केही रकम त फिर्ता हुन्थ्यो भन्ने मुडमा पुगेका हुन् । अहिले धेरै व्यवसायीले पसल, रेष्टुरेन्ट लगायत व्यवसाय बन्द गरेर समान सस्तो भाडाको गोदाममा लगेर थन्काएर राख्नुपर्ने अवस्था देखिएको छ ।
अहिले न्यूरोड, असन, इन्द्रचोकमै सस्तोमा पसल किन्न पाइन्छ । ठमेल, झम्सिखेल, नक्साल, बालुवाटार, बानेश्वर लगायत प्रिमियम हटस्पटमै अधिकतम मूल्य मिलाएर रेष्टुरेन्ट किन्न सकिन्छ । महाबौद्धका व्यवसायी भागाभागको स्थिती आइसकेको छ । कतिपय मलमा कोरोना संक्रमित भेटिएपछि सिल गरिएको छ ।
बेच्नेभन्दा बन्द गर्ने धेरै !
कोरोना महामारीका बेला पसल बेच्न खोज्दा ग्राहक पाउनु भनेको भगवान पाएजस्तै हुन थालेको छ । यो ट्रेण्ड बुझेका ब्यबसायीहरु ग्राहक कुरेर भाडाको बोझ उठाइरहनुभन्दा बन्द गर्नु फाइदाजनक देख्न थालेका छन् ।
अनलाइन एजेन्सीको काम गर्दै आइरहेको फेसबुक पेज ‘घर खरिद बिक्री’का सुदन भण्डारी भन्छन्, ‘बजारमा पसल किन्ने ग्राहक नभएपछि बिक्री गर्न खोज्नेभन्दा बन्द गर्ने धेरै छन् ।’ अहिले फेसबुकतिर बिक्रीका लागि राखिएका पसलहरु बन्द गर्नुभन्दा थोरै पैसामा भए पनि बेच्न खोज्नेहरु मात्र भएको उनको भनाई छ ।
पसल किनबेच गराउने एजेन्सी ‘पसल खरिद बिक्री सेवा’का निहाल बरालका अनुसार पसल बिक्री गर्न खोज्नेको संख्या यतिबेला ४÷५ गुनाले बढेको छ । तर, अहिले किन्न चाहनेको संख्या भने सून्यजस्तै छ ।
उनका अनुसार लकडाउन अगाडी किन्ने र बिक्री गर्ने दुबै पक्षको खोजीनीति लगभग बराबर हुन्थ्यो । ‘फेरी लकडाउनमा कडाई हुन थालेपछि रेष्टुरेन्ट, क्याफे, बुटिक, फेन्सी पसल लगायतको बिक्रीका लागि चाप बढ्न थालेको छ’ उनी भन्छन्, ‘व्यापारिक केन्द्रदेखि शहरका कुनाकाप्चाका व्यवसायीसम्मले बिक्रीका लागि आग्रह गरिरहेका छन् ।’
अझै पनि केही ब्यबसायी ऋण गरेरै भए पनि भाडा तिर्ने र गास काटेरै भए पनि निर्वाह गरी दशैंसम्म कुर्ने मनस्थीतिमा छन् । यदि दशैंको मुखमा पनि लकडाउन खुलेर ब्यापारमा बहार आएन भने अलिअलि बित्तिय ब्याकअप भएका बाँकी ब्यबसायी पनि दशैंपछि सधैका लागि पलायन हुने अबस्थामा पुग्नेछन् ।
लाखौंको संख्यामा रोजगारी सिर्जना गर्ने र मुलुकको आर्थिक गतिबिधिका मेरुदण्डका रुपमा रहेका खुद्रा ब्यापारी तथा रेष्टुँराहरु यसरी पलायन हुने अबस्थामा पुग्दा पनि कोभिड प्रभावित ब्यबसायलाई सहयोग गर्छु भन्ने सरकारी नीतिको लाभ यी ब्यबसायीसम्म पुग्न सकेको छैन् ।
स्टार्टअप र कम लगानीका रोजगारीमूलक ब्यबसायलाई दिने भनिएको कम ब्याजदरको ऋण पाउने कार्यबिधिसमेत बन्न सकेको छैन् । यस्तो अबस्थामा रिटेल बिजनेस धानिरहेका काठमाण्डौका पसलकवल सञ्चालकहरु पलायनको पीडामा पुगेका छन् ।
५ बर्ष कान्छा प्रेमीसँग बिहे गरेकी रश्मीको फोटोको ट्याटु श्रीमानको छातीमा, रहस्य यस्तो रहेछ
धादिङमा ट्रकले आमाछोरीलाई ठक्कर दियो, छोरीको गयो ज्यान